प्रमुख दलका नेताहरूबीचको आरोप-प्रत्यारोपले राजनीति तात्दै - Khabarpur | Most Updated Nepali Online Portal
प्रमुख दलका नेताहरूबीचको आरोप-प्रत्यारोपले राजनीति तात्दै
निबार देशका भिन्दाभिन्दै कार्यक्रममा सहभागी गठबन्धनका नेताहरूले एमालेमाथि र एमाले नेताहरूले गठबन्धनमाथि जमेरै प्रहार गरे
आगामी ३० वैशाखमा एकै चरणमा हुन थालेको स्थानीय तहको निर्वाचनको तयारीमा जुटेका प्रमुख दलका नेताहरूबीचको आरोप–प्रत्यारोपले राजनीति तात्दै जान थालेको छ । गठबन्धन, एमसिसी, संसद् विघटन र अदालतको आदेशमा केन्द्रित भएर नेताहरूबीच घोचपेचको राजनीति सुरु भएको छ ।
शनिबार देशका भिन्दाभिन्दै कार्यक्रममा सहभागी गठबन्धनका नेताहरूले एमालेमाथि र एमाले नेताहरूले गठबन्धनमाथि जमेरै प्रहार गरेका छन् । स्थानीय तहको निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै विभिन्न जिल्लामा दलका नेताहरूले राजनीतिक कार्यक्रमसमेत अघि बढाएका छन् ।
भयरहित निर्वाचन गर्न सबै प्रतिबद्ध हुनुपर्छ : प्रधानमन्त्री
काभ्रे/ प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आगामी निर्वाचनलाई निष्पक्ष, स्वतन्त्र र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गर्न सबै प्रतिबद्ध हुनुपर्ने बताएका छन् । काभ्रेको तेमाल गाउँपालिकाको पोखरी नारायणस्थानमा शनिबार नवनिर्मित प्रशासकीय भवनको उद्घाटन गर्दै उनले निर्वाचनलाई सबै पक्षले निष्पक्ष, स्वतन्त्र र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए ।
‘देश अहिले स्थानीय तहको निर्वाचनको संघारमा छ, निर्वाचनलाई निष्पक्ष, स्वतन्त्र र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गर्न सबै प्रतिबद्ध हुनु आवश्यक छ,’ उनले भने । देउवाले जनप्रतिनिधिले जनसवालका काम मात्र गरेर नहुने भएकाले काममा पारदर्शिता, गुणस्तरीयता, जवाफदेहिता र जनताको अपनत्व पनि सुनिश्चित गर्नसमेत आवश्यक रहेको बताए ।
गठबन्धनलाई जनताको आँगनमा पछार्नुपर्छ : ओली
एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट बनेको सत्तारूढ गठबन्धनलाई चुनावबाट पराजित गरिने बताएका छन् । ‘यो गठबन्धन अदालतले बनाइदिएको हो । यस्तालाई जनताको आँगनमा लगेर पछार्नुपर्छ । अदालतले बनाएको सरकारलाई मुद्दा लड्न जाऊ भन्ने हो, हामी जनताको बीचमा जाने हो,’ केन्द्रीय सम्पर्क समन्वय कमिटीअन्तर्गतका कार्यकर्ता प्रशिक्षणमा शनिबार ओलीले भने, ‘झगडियाको काम मुद्दा लड्ने हो, हामी जनताको बीचमा जान्छौँ । जनताको समर्थन लिएर सरकारमा जान्छौँ ।’
उनले अबको निर्वाचनबाट एमाले ठूलो दलको हैसियतबाट बहुमतप्राप्त पार्टी बन्ने दाबीसमेत गरे । ‘अहिलेको अवस्थामा हामी प्रतिपक्षमा छौँ, तर यो अस्थायी मात्रै हो । अहिले पनि हरेक ठाउँमा एमाले पहिलो र सशक्त पार्टी छ । अबको परिणामले एमाले ठूलो पार्टी मात्र होइन, अत्यधिक बहुमतको पार्टी हुन्छ,’ ओलीले भने ।
कांग्रेसले एमाले सरकारले गरेको कामबारे जनतामा भ्रम फैलाउने गरी गलत प्रचार गर्न सक्ने भन्दै कार्यकर्तालाई प्रतिवाद गर्न निर्देशनसमेत दिए । ‘कांग्रेसको चुनावसम्बन्धी नीति अघिल्लो सरकारको भण्डाफोर गरेर जाने, जे पायो त्यही भन्ने । कांग्रेसले जे पायो त्यही भन्छ, यो उसको पुरानो बानी हो,’ ओलीले भने, ‘कांग्रेसले ६० वर्ष पुगेकालाई कम्युनिस्टले गोली हानेर मार्छ भन्थ्यो, के अब कांग्रेस बुढाबुढीको छेउमा जान्छ त ? यी सबै कुराको प्रतिवाद गर्नुस् ।’ ओलीले एमाले फुटाएर एकीकृत समाजवादीको नेतृत्व गरेका माधवकुमार नेपालप्रति कटाक्ष पनि गरे । एमालेको सांसदको लोगो लगाएर कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बनाउने अनैतिक कामको नेतृत्व गरेको भन्दै ओलीले त्यस्तो क्रियाकलापको जनताको बीचमा भण्डाफोर गर्न पनि कार्यकर्तालाई निर्देशन दिए ।
ओली बयलगाडाकै युगमा : प्रचण्ड
माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अहिलेको गठबन्धन निर्वाचनसम्म कायमै रहने बताएका छन् । माओवादी सिन्धुली जिल्ला पार्टी कार्यालयको नवनिर्मित भवनको उद्घाटन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रचण्डले गठबन्धनलाई लिएर सत्तासाझेदार दलहरूबीच छलफल भइरहेको बताए । ‘अहिलेको गठबन्धन निर्वाचनको समयमा पनि कायम रहन्छ । निर्वाचनको समयमा सत्तासाझेदार दलहरू एकता कायम गरेर जानुपर्छ भन्नेबारे हामीबीच छलफल भइरहेको छ,’ प्रचण्डले भने ।
तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहको घमण्ड र मूर्खताका कारण मुलुकमा गणतन्त्र आउन सम्भव भएको र ओलीको कुबुद्धिका कारण अहिलेको सत्तागठबन्धन बनेको प्रचण्डको भनाइ थियो । ‘ओलीका कारण गठबन्धन बनेको हो । उनलाई धन्यवाद दिनुपर्छ । अहिलेको अवस्था सिर्जना नभएको भए माओवादी केन्द्र जनतासँग जोडिन पाउँदैन थियो, देश र जनताको रक्षाका निम्ति लड्न पाउने अवसर प्राप्त हुँदैनथ्यो,’ प्रचण्डले भने । प्रचण्डले ओलीलाई परिवर्तन नपचेको आरोप लगाए । ‘लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका लागि जनयुद्ध र जनआन्दोलन चलिराखेको थियो । तर, केही नेताहरू नेपालमा गणतन्त्र सम्भव छैन, गणतन्त्र आउँछ भन्नु र बयलगाडा चढेर अमेरिका जान्छु भन्नु एउटै हो भन्थे,’ उनले भने, ‘ती अहिले पनि गणतन्त्रको विरोधमा छन् । अहिले पनि बयलगाडाको सिद्धान्तमै छन् । उनीहरू संविधान उल्ट्याउन चाहन्छन्, गणतन्त्र उल्ट्याउन चाहन्छन् । यो देशलाई धार्मिक अतिवादमा लगेर विदेशीको अगाडि सुम्पिन चाहेका छन् ।’
प्रचण्डले आगामी निर्वाचन माओवादीका लागि गर वा मरको अवस्थामा रहेको र जनताकहाँ गएर माफी माग्न कार्यकर्तालाई निर्देशन दिए । ‘सबै नागरिकको घरघरमा पुगेर माफी माग्दै विगतमा हामीले केही गल्ती गर्‍यौँ , अब हामी यस्तो गल्ती दोहोर्‍याउँदैनौँ भन्ने प्रतिबद्धता जनाउनुहोला,’ प्रचण्डको भनाइ थियो । प्रचण्डले इँटको जवाफ पत्थरले दिन माओवादी तयार रहेको बताए । ‘अहिले माओवादी केन्द्रलाई जनताबाट कुनै पनि समस्या छैन । गुन्डागर्दीको चुनौती छ । यस्तो अवस्थामा इँटको जवाफ पत्थरले दिनुहोला,’ उनले कार्यकर्तालाई निर्देशन दिए ।
प्रचण्डले विगतमा तत्कालीन प्रधानसेनापति रुक्माङ्गत कटवाललाई पदच्यूत गर्न लाग्नु र तत्कालीन कांग्रेसका सभापति स्वर्गीय गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई राष्ट्रपति नबनाएदेखि नै माओवादी केन्द्र ओरालो लागेको सुनाए । उनले अहिले पनि एमसिसीको विषयलाई लिएर कार्यकर्ता र नेपाली जनताबाट पास नगर्ने, बरु सत्ताबाट बाहिरिन सुझाव र दबाब आएको भए पनि यसले पार्टी झन् ओरालो लाग्नेतर्फ सचेत भएकाले व्याख्यात्मक टिप्पणीसहित एमसिसी पास गरेको बताए । व्याख्यात्मक टिप्पणी संसद्बाट अनुमोदन भएकाले यसले कानुनी रूप लिने उनले दाबी गरे । उनले व्याख्यात्मक टिप्पणीले जनतालाई अधिकार दिलाएको र टिप्पणीले अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा समेत मान्यता पाउने भएकाले यसको अर्थ रहेको बताए ।
चुनावमा ओलीको बाकसमा जिरो मत आउँछ : खनाल
एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनालले संविधानविपरीत संसद् विघटन गर्ने एमाले अध्यक्ष केपी ओलीलाई अबको निर्वाचनमा जनताले सजाय दिनुपर्ने बताएका छन् । पार्टीको गुल्मी–काठमाडौं सम्पर्क मञ्चले शनिबार आयोजना गरेको कार्यक्रममा खनालले त्यस्तो बताएका हुन् ।
‘केपी ओली र विद्या भण्डारीले संविधानका प्रावधानविरुद्ध गएर संसद् विघटन गर्ने योजना बनाए । यो दक्षिणपन्थी अवसरवाद र अपराध कर्म हो । सामान्य ऐन उल्लंघन गर्दा जेल जानुपर्छ, कैयन् वर्ष कैदी भएर बस्नुपर्छ । तर, संविधान नै उल्लंघन गर्नेलाई खै सजाय ? त्यसकारण अब सजाय दिने वेला आएको छ,’ खनालले भने, ‘अब आउने निर्वाचनमा केपी ओलीले सबैभन्दा ठूलो सजाय पाउनुपर्छ र उनको बाकसमा जिरो मत पर्‍यो भने मात्र नेपाली जनताले संविधानको सही ढंगले रक्षा गरेको ठहरिन्छ ।’
अहिलेको सरकारले विकास गर्नु र साँढेले दूध दिनु उस्तै हो : लिङ्देन
राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले अहिलेको सरकारले विकास गर्नु र साँढेले दूध दिनु उस्तै भएको बताएका छन् । नेपालको राजनीति तीन दशकदेखि तीन दलको वरिपरि घुमेको र उनीहरूबाट विकास सम्भव नभएको उनको भनाइ छ ।
‘नेपालका तीन राजनीतिक दलले विकास गर्नु भनेको साँढेको टाङमुनि बाल्टिन थापेर दूध दिएन भन्नुजस्तै हो । साँढेलाई जति घाँस हाले पनि, दाना खुवाए पनि दूध दिनेवाला छैन, यस्तै अहिलेको सरकारले पनि जति वर्ष सरकार चलाए पनि देश विकास गर्नेछैन,’ उनले भने ।
उनले कांग्रेस सभापति तथा हालका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई कतिपटक र कति वर्ष प्रधानमन्त्री बनाउँदा देशको विकास हुन्छ भनेर नेपाली जनताले सोध्नुपर्ने बताए । एमसिसी व्याख्यात्मक टिप्पणीसहित पास गर्नु भनेको आफ्नो जमिन बिक्री गरेर परिवारका सदस्य बसेर ६ महिनाभित्र फलानोले फिर्ता गर्नेछ भन्नुजस्तै भएको उनको टिप्पणी छ । ‘अहिलेको सरकारले एमसिसीबाट आएको रकमले यस्तो गर्छु, उस्तो गर्छु भन्नु नेपाली जनतालाई भ्रममा राख्नु मात्रै हो,’ उनले भने, ‘यो रकमले केही किलोमिटर विद्युत् लाइन विस्तारभन्दा केही हुनेछैन, यसले नेपाललाई भन्दा भारतलाई सहयोग पुग्छ ।’
कांग्रेस जे बोल्छ, त्यो गर्छ : डा. महत
कांग्रेस प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतले सत्तासाझेदार अन्य दलले ल्याउने प्रस्तावमा चुनावी गठबन्धन हुने–नहुने भर पर्ने बताएका छन् । तर, स्थानीय निर्वाचनमा गठबन्धनबीच तालमेलको सम्भावना एकदमै न्यून रहेको उनको भनाइ छ । तालमेलको बहसमा नलाग्न कार्यकर्तालाई निर्देशन दिए । ‘सत्तागठबन्धन दलबीच निर्वाचनमा तालमेल हुने निश्चित छैन । कांग्रेसले एक्लै चुनाव जित्छ, अरू दलसँग तालमेल किन गर्नुपर्‍यो,’ प्रेस युनियन बाँकेले शनिबार नेपालगन्जमा गरेको पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा प्रवक्ता डा. महतले भने, ‘सत्तागठबन्धन दलले ल्याएको प्रस्तावको आधारमा कांग्रेसले निर्णय लिन्छ । अरू दलले कस्तो प्रस्ताव ल्याउँछन्, जित–जित हुने अवस्थामा मात्र गठबन्धन दलको प्रस्तावलाई स्विकार्न सकिन्छ । निर्वाचनमा समेत तालमेल गर्ने गरी गठबन्धन बनेको होइन । विशेष परिस्थितिमा बनेको गठबन्धन निर्वाचनसम्म नजान पनि सक्छ ।’
प्रवक्ता डा. महतले एमसिसी नेपाल र नेपालीको हितमा भए पनि सत्तागठबन्धनमा रहेका दलले नै बाहिर अफवाह फैलाएको आरोप लगाए । सत्तामा बसेका दलले एमसिसीविरुद्ध बाहिर नाराबाजी गर्न लगाएको बताउँदै उनले कांग्रेसले आफ्नो अडान नछोडेपछि अरू दल पनि लाइनमा आएको बताए । ‘अरू दलजस्तो कांग्रेस होइन, कांग्रेस जे बोल्छ, त्यो व्यवहारमा उतार्छ, जनतालाई देखाउन बाहिर विरोध गर्ने, तर संसदमा समर्थन जनाउने दल होइन,’ डा. महतले भने । उनले चैत महिनामै कांग्रेसले स्थानीय तह निर्वाचनको उम्मेदवार टुंग्याउने स्पष्ट पारे । उनले चुनावमा जित्नका लागि जाने भएकाले जित्न सक्ने नेताको पहिचान गरी उम्मेदवार बनाउने बताए । ‘आफ्नो मान्छेभन्दा राम्रो र भोट तान्न सक्ने लोकप्रिय व्यक्तिलाई प्राथमिकता दिइनेछ,’ उनले भने ।